ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ကမ္ဘာကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲကတည်းကဤမျှလောက်ပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကြောင်းပြောင်းလဲမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဆိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အသစ္အသစ္ေသာဂိမ္းမ်ားကိုေနာက္ဆံုးေပၚေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားျဖင့္သာျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္သင္၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္လူးလွိမ့္ေနေသာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအားလံုးကိုသင့္အတြင္း၌ရွိေနသလိုခံစားရေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏မျိုးဆက်သစ်ဤမျှလောက်အပြန်အလှန်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သင်ဤဂိမ်းများတွင်လိင်ကျော်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိန်းချုပ်မှုကိုမယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။, သင်တို့သည်လည်းဇာတ်ကောင်ကြည့်ရှုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရှိသည်နှင့်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူဂိမ်းသင်လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်မူတည်. အသစ်ကဂိမ်းအကြောင်းကြောက်မက်ဘွယ်င့်နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်သူတို့လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆို၎င်းတို့ကိုကစားရလိမ့်မည်၊၎င်းသည်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်လျှင်နေပါစေ။ အဆိုပါထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဂိမ်းကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တဦးတည်းအဖြစ်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကျနော်တို့အန်းဒရွိုက်နှင့်အိုင်ကွန်နှစ်ခုလုံးအပေါ်တိုင်းတစ်ခုတည်းဂိမ်းစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သေချာပါစေ။
သငျသညျလုံးဝအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအရာအားလုံးကစားနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမတောင်းဘူးဆိုပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာမှတ်ပုံတင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုမတောင်းတော့ပါဘူး။ သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်စာဝှက်ထားသောဆက်သွယ်မှုရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလံကိုကြော်ငြာတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲမှတပါး,ဤဂိမ်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဘို့ဆိုက်အတူတကွထားရန်မည်သို့သိနှင့်သင်ဒီမှာအမာခံလိင်ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့သင်၏အသက်တာ၏အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
လိင်ဂိမ်း၏ဤစုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်အွန်လိုင်းအော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့လိုတဲ့အခါတခြားဘာမှမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိုလာတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းတယ်၊ငါတို့မှာမည်သူမဆိုအတွက်ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ သငျသညျအမျိုးသမီးသို့သို့မဟုတ်သင်ယောက်ျားကြိုက်နှစ်သက်လျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။
ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်များမှပူပြင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများ၊ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပင်ပါ ၀ င်သည့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုဖြောင့်ဖြူးသောညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုကိုလည်းနေပါစေသူတို့၏လိင်စိတ်,မည်သူမဆိုအားဖြင့်ကစားကြသည်သောညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်။ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ၊ အများကြီးပိုပါတယ်။ သင်ရုံရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ရန်ရှိသည်။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဒီဂိမ္းဆိုဒ္အသစ္ကိုလူတိုင္းလိုလိုကသူတို႔ျဖည့္ခ်င္သလိုျဖည့္လို႔ရတဲ့ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကိုေတြ႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ကိုပိုၿပီးအျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခြေခံအားဖြင့်,ငါတို့သည်သင်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေကြသည်ဆိုအခမဲ့လိင်ပြွန်များအတွက်အလားအလာရွေးချယ်စရာပေးချင်တယ်. ဒီဆိုက်အားလုံးဂိမ်းလိင်ရုပ်ရှင်တတ်နိုင်သမျှထက်ပိုသင်နှစ်သက်သွားကြသည်။ သင်ရုံတစ်ချိန်ကဒီအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားရန်ရှိသည်များနှင့်သင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏မြေတပြင်လုံးအယူအဆအပေါ်ရောင်းချပါလိမ့်မည်။ အသစ် HTML၅ ဂိမ်းများနှင့်တူဘာမှမအဟောင်းမီးေ။, ဤသည်ညစ်ညမ်း၏အနာဂတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အတူ,သင်အခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်း၏နောက်=ပါရမီကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။